Ikhaya/umbono yam yokuqala
I-Supermap GIS ngumboneleli wenkonzo ye-GIS, enexesha elide kwimarike kunye nerekhodi lomkhondo ukususela ekuqalweni kwayo kwiisombululo ezininzi kumxholo we-geospatial. Yasekwa ngo-1997, liqela leengcali…
Kunokwenzeka ukuba asisoze sayibona iSmartCity yokwenyani, enombono wayo ofanelekileyo. Kusenokwenzeka ukuba kukho iimfuno ezisisiseko ngakumbi kwiimeko zethu kunokucinga nge-Intanethi yezinto. Nokuba, yintoni na abavelisi be…
Ngabasebenzisi abangaphezu kwe-15,000 kumazwe angama-50 kwaye ifumaneka ngeSpanish, isiNgesi, isiFrentshi kunye nesiPhuthukezi phakathi kwezinye iilwimi, i-MDT yenye yezona zicelo zixatyisiweyo ezithetha iSpanish ziinkampani ezizinikele kwi-geoengineering. I-APLITOP ine...
Phakathi kwezicwangciso ze-Geofumadas ze-2012 kuvavanyo lwezicelo ze-Android, kuthathelwa ingqalelo ukuba yinto engenakuguquleka. Siyazi ukuba iApple iya kuhlala ikwinqanaba leselula kodwa ngokungafaniyo nayo yonke into…
Ukuba ucinga ngokuthenga iNetbook, mhlawumbi iDell mini 10 inokuba lukhetho. Ngexabiso lijikeleze i-US $ 400, liphantsi kakhulu kune-Acer Aspire One yokuqala ekuqaleni. Ngaba ngaphezulu okanye ...
Ukulandela ukuthengwa kukaTrimble kweAshtech, iSpectra iqalisile ukwazisa iimveliso zeMobile Mapper. Eyona ilula kwezi yi-Mobile Mapper 10, endifuna ukuyijonga ngeli xesha. Iinguqulelo eziphathwayo...
Ndifumene inguqu ye-PowerView V8i Khetha i-Series 2 (i-Version 8.11.07), umgca webhajethi kwindawo yokubonisa i-Bentley enethemba lokuyisebenzisa. Ekuqaleni, amanye amathandabuzo am aphelisiwe kwisithuba sangaphambili xa ndibonisa…
Ukuba awuzange uve nge-FastCAD ... kufuneka. Ndiyazi, kunokwenzeka ukuba okokuqala uyazi ukuba le nkqubo ikhona, kodwa ndifuna ukuthatha umzuzwana kobu busuku be-ayisikrimu kunye ne-Oreo cookies ukubonisa isixhobo esi...
Emva kweentsuku ezimbalwa zokuhamba nge-gvSIG 1.9, ukungabi namonde kwam ngenxa yeempazamo kule nguqulo kunye nezinye iingozi, namhlanje ndibuyela kumxholo we-gvSIG. Ukungachukumisi le software ixesha elide kunemveliso kum, kuba ukuvula…
I-Ashtech isandula ukuphehlelela imodeli yayo entsha yezixhobo, esandul' ukuboniswa kwiNkomfa yaMazwe ngaMazwe ye-ESRI, ebizwa ngokuba yi-Mobile Mapper 100, nto leyo eyenzeka ngeempawu ze-Mobile Mapper 6 kodwa ichaneke ngaphezu...
NgoJuni ka-2010 kuye kwaphawulwa ukuba i-ArcGIS 10 iya kufumaneka, esiyibonayo iya kuba yinqanaba elibalulekileyo lokuqaphela inqanaba lokubeka i-ESRI kwindawo ye-geospatial. Sele kwiiforam nakwezinye iindawo kukho intetho eninzi, kwaye ngokuqinisekileyo...
I-TopoCAD sisisombululo esisisiseko kodwa esibanzi sovavanyo, uyilo lweCAD, kunye noyilo lobunjineli; nangona isenza ngaphezu koko kwindaleko eye yamthatha ngaphezu kweminyaka eyi-15 emva kokuzalwa kwakhe eSweden. Ngoku igalelwe amanzi...
Ndincoma ukuthatha umzuzwana ukuyazi loo blog, ngoku ifikelela kunyaka wokusebenza. Ndibhekisa kwi-ConstrucGeek, imizuzu emithandathu okulindeleke ukuba uzinikele ekufundeni i-geofumada entsha kufuneka ityalwe kule bhlog. Zimbini kuphela...